Tele RELAY တစ်ခု - အီဗရာqu'entraÃ®neurလူငယ်အဖြစ်မန်ယူမှာပြန်လည်ရောက်ရှိ
မူလစာမျက်နှာ » အားကစားများ တစ်အီဗရာqu'entraÃ®neurလူငယ်အဖြစ်မန်ယူမှာပြန်လည်ရောက်ရှိ»
ယခင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသူ©သုံးကြိမ်မှာပရီးမီးယားလိဂ်အနိုင်ရထားပြီးဘယ်မှာ 2006 2014 မှာမန်ယူအသင်းမှာရှစ်နှစ်©françaisသုံးစွဲခဲ့သည်။ အဖြစ်ချန်ပီယံလိဂ်နှင့်သူ၏ရွေးချယ်မှုများဝေမျှဖို့နောက်ကျောယခု Mie ယူနိုက်တက်©ကြိယာစာစောင်၏ငယ်ရွယ်ကစားသမားနှင့်အတူ rience နှင့်အသိပညာ©ဖြစ်ပါတယ်။
- စိတ်ကူးယဉ်ပရီးမီးယားလိဂ် ESPN: ယခုမှတ်ပုံတင်မည်!  19659002] အီဗရာ, 38 နှစ်နီးလ်ရိုင်ယန်françaisâနှစ်ခုကစားသမားရေးစပ်ဟာအလွန်ထူးချွန်အဖွဲ့©တစ်ဦး©အီးနှင့်အတူentraÃ®nerမှာဖြစ်ပါတယ်, 18 နှစ်ပေါင်းထက်လျော့နည်း၏နည်းပြကူညီပေးသည် € " အသစ်က်ထမ်းခေါ်ယူမှု, Hannibal Mejbri နှင့်တိုက်စစ်မှူး Noam Emeran ။
Carrington အင်္ဂါနေ့မှာသူ၏ပထမဦးဆုံး Journal ©အီးလယ်ကွင်း Da €™entraÃ®nementကလပ်
အီဗရာ "သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏အဆုံးကိုဦးတည်နေတဲ့အငြင်းပွားဖွယ်ရာမှာကိုင်တွယ်ရန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ©© Silia ပြီးနောက် Marseille ရလဒ်နဲ့သူ့ရဲ့စာချုပ်ကိုမြင်လျှင် ©သည့်ယူရိုပါလိဂ်တစ်ဦးပွဲရှေ့တော်၌မိမိကိုယ်ပိုင်ပရိသတ်တွေထဲကတစ်ခုမောင်းထုတ်ခံရထားပါတယ် နိုဝင်ဘာလ 2017 အတွက် Guimaraes မှာ။
ထို့နောက်သူသည်ရှေ့တော်၌©က်စ်ဟမ်းမှာခြောက်လကြာအောင် အနားယူကြေညာ ။ ထိုအချိန်မှစ. သူလူမှုရေး Ma © Dias အပေါ်တစ်ဦးထင်ရှားတဲ့ပုံ©©မှာဖြစ်ခဲ့သည်။
သို့သျောလညျး, သူ့ရည်မှန်းချက်ကိုအမြဲပြန်ယူနိုက်တက်မှာ©တစ်မြို့ qua €™သူအိမ်မှာခေါ်နှင့်သူ၏တံဆိပ်များ Da €™entraÃ®nementလုပ်နေစဉ်ကသူ၏€™အဆိုပါ€™ကြိယာစာအုပ်© Mie တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။
အီဗရာမတ်လထဲမှာအရာဝတ္ထု€™ Da €™အငြင်းပွားဖွယ်ရာဝန်ပို©ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်လုပ် ထို့နောက်သူ€™ s ကိုကျော်ကြား© CA ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်းအပေါ်ယူနိုက်တက်၏အံ့မခန်းအောင်ပွဲ qua ။ ထို့နောက်သူသည် ©အီး©ပြောပြီ Da €™ဆန့်ကျင်ဘာသာစကားအားဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသော စပ်လျဉ်း 1 လိဂ်၌တည်၏။
ဤဆောင်းပါးတွင်ပထမဦးဆုံးပေါ် (အင်္ဂလိပ်လို) သည်ထင်ရှား http://espn.com/soccer/manchester-united/story/3940649/evra-returns-to-man-utd-in-youth-coach-capacity
ကစားသမားများ၏အဖြစ်အပျက်များအပြီးတွင်အာဆင်နယ် '' ဂိုဏ်းအကြောင်းကိုအကြီးအ discussion '